Kooxo hubeysan oo nin ganacsade ahaa ku dilay Beledweyne – Radio Muqdisho
Kooxo buhaysan ayaa saakay magaalada Beledweyne ku dilay nin ganacsade ah oo can ka ahaa degmada sida ay xaqiijiyeen maamulka degmada Beledweyne.
Xaaji Cismaan Qooroow oo ganacsade ahaa isla markaana odayaasha dhaqanka ka tirsanaa ayaa la dilay saakay markii u ka soo baxay gurigiisa oo ku yaalla xaafadda Howl-Wadaag. Nin hubeysan ayaa dilay, kaddibna baxsaday sida ay sheegen saraakiisha ciidamadu.
Guddoomiyaha degmada Beledweyne Macalin Cismaan Qallaafoow, ayaa sheegay in ciidamada ammaanku ay ku daba jiraan kooxdii dilka geysatay, dhawaana ay warbixin siin doonaan warbaahinta.
Ninkan ganacsadaha ahaa ee la dilay ayaa lahaa shirkad dhisme oo qandaraasyo ku qabtay dib u dhiska dhowr xarumood oo ay ku jiraan goobaha adeegga bulshada.
Dhagayso Warka Subaxnimo 17.02.2015